Fikarohana momba ny firaisana Ilay mpilalao sarimihetsika Ryan Reynolds ho Reincarnation an'ny Kintan'ny sarimihetsika mangina ao Harold Lloyd, miaraka amin'ny fiainana taloha an'i Joaquin Phoenix ary ny Fahatongavan-tena ankehitriny momba an'i Harry Langdon - Fikarohana Reincarnation
Nicole Arciola amin'ny maha Reincarnation an'i Harry Langdon
I Nicole Arciola dia liana manokana amin'ny vanim-potoanan'ny sarimihetsika mangina satria izy ihany no nanangana an'i Harry Langdon, mpilalao sarimihetsika tamin'izany fotoana izany. Amin'ny alàlan'ny fipihana ny anarany, nomena etsy ambony, dia misy afaka mandinika ny momba azy. Efa nanolotra tranga fanakorontanana indray izy tamin'izany. Toy ny ohatra, izy dia nanolotra ity lalao manaraka ity:
Harold Lloyd amin'ny maha-fiainana taloha an'i Ryan Reynolds
Vao haingana i Nicole dia nanolotra an'izany Ryan Reynolds ny reincarnation of Harold Lloyd, izay nohamafisina tamin'ny fivoriana iray niaraka tamin'i Kevin Ryerson. Nanamarika i Nicole fa i Reynolds sy Lloyd dia mitovy endrika tsara ihany, na dia tsy hita miharihary aza ny fitoviana toy ny sary maro toa an'i Lloyd izay matetika misambotra mitafy solomaso be.
Nanazava i Nicole fa i Harold Lloyd dia te-ho mpanao hatsikana mampihomehy, toa an'i Charlie Chaplin namany, saingy i Lloyd dia nilazana fa tsara tarehy loatra izy, noho izany, noho izany dia naka ny solomaso i Lloyd mba hijery nerdy. Lloyd, amin'ny fomba, na dia tsy malaza toa an'i Chaplin aza, dia nahazo vola bebe kokoa tamin'ny alàlan'ny sarimihetsika noho ny nataon'i Chaplin.
Ankoatra ny fanesoana nataony tamin'ny sarimihetsika nataony dia i Harold Lloyd koa dia olona tsy nahy teo amin'ny sarimihetsika. Ryan Reynolds, ankoatry ny fanaovana fampisehoana amin'ny hatsikana mampihetsi-poana azy, dia nitana andraikitra maherifira toa azy ihany koa Deadpool sarimihetsika.
Ny tranga Reincarnation dia mirotsaka amin'ny sarimihetsika sy kintana amin'ny fahitalavitra
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Mitovitovy ny endri-tarehin'i Ryan Reynolds sy i Harold Lloyd.
Ny faniriana taloha, Talenta ary Abilities: Harold Lloyd dia iray amin'ireo mpilalao sarimihetsika nahomby indrindra tamin'ny fotoanan'ny sarimihetsika mangina, toa an'i Ryan Reynolds ao amin'ny tontolon'ny sarimihetsika ankehitriny.